ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: 28/09/07
လာမယ့် သောကြာနေ့ (28.09.07) မှာ တကမ္ဘာလုံး အနီရောင်ဝတ်ပါမယ်... Red Campaign
People in Yangon are putting their lives at stake in the Campaign of freedom. We will participate in this by coming Friday(28/09/07) at Peninsula Plaza at 8:30pm sharp wearing red shirt.Pls prove that our blood has the same color as people in Yangon. Pls forward this msg to ur friends.
စနေနေ့ တိုပါးရိုး ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားရင်၊ အင်္ကျီအနီဝတ်ပြီး သာသနာ့အလံ ထိုးကြပါရန် ... ။
ရေးပြီးချိန်: 9/27/2007 11:09:00 PM